पर्यटनबाट करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > पर्यटनबाट करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी
काठमाडौ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार आव २०७२/७३ मा पर्यटन क्षेत्रबाट रु ४१ अर्ब ७६ करोड ५० लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यो आर्जन विदेशी मुद्राको अनुपातमा ५५ लशमलव आठ प्रतिशत, कुल वस्तु निर्यात तथा सेवाबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा आर्जनको अनुपातमा १९दशमलव छ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
२०७४ जेष्ठ २१ गते १८:०२ मा प्रकाशित
सक्रान्तिमा बिजुली आउँदा मानिसहरु किन हर्षित ?
नामिवियाबिरुद्धको क्रिकेट खेल नेपालले कीर्तिपुरमै खेल्ने पक्का
लगातार हकप्रद निष्काशनको पक्षमा आएसडीसी, प्रतिसेयर आम्दानी र बजारमूल्य कती ?
थाहा पाउनुस् उपत्यकामा आज के हुँदैछ ?